Ukukhuthazwa kwemisebenzi ekhaya
Uma isonto lama-40 lokukhulelwa selidlulile, kodwa ukusebenza akukaze kwenzeke, ababelethisi banikeza owesifazane okhulelwe ukwenza ukuvuselelwa kokusebenza kwabasebenzi. Ezimweni zesibhedlela, le nqubo ayifuni ukuchitha isikhathi esimnandi: zisebenzisa amalungiselelo e-hormonal, i-kelp, ama-gel akhethekile, njll. Ngakho akumangalisi ukuthi abesifazane abaningi bakhetha ukukhuthazwa kwemvelo ekhaya.
Izindlela zokugqugquzela ukuzalwa kokubeletha: "for" futhi "ngokumelene"
Ububi bokuvuselela okufakelwayo kubandakanya:
ukuzwakala okukhulu kwezingqinamba;
amathuba okusebenzisa imithi yobuhlungu;
kungenzeka ukuthi umoya we-oxygen ulambile we-fetus;
ingozi yokuphuluka kwesibeletho kulesi sikhala, uma ukuhanjiswa kwangaphambilini kuthathwe ngomzila osebenzayo;
ukungakulungeli kwe-fetus yokuzalwa;
iphesenti ephezulu yokusebenzisa i-extractor egunjini noma ukusebenzisa i-forceps.
Lokho kimi kancane, ukukhuthazwa okufakelwayo kuboniswa uma:
iminyaka yobudala idlula amaviki angu-42;
owesifazane unokukhulelwa okuningi;
zikhona izifo zegciwane le-thyroid kanye nezinso;
I-umbilical cord ibuyela emuva.
Ukukhuthazwa kwemisebenzi ngamakhambi abantu
Okukhangayo kunazo zonke ukuvuselelwa kwemvelo kwemisebenzi ngamakhambi abantu. Nakhu ongakwenza kulokhu:
Qalisa ubuhlobo bobulili. Esikhathini sabantu besilisa kuqukethe i-prostaglandin, i-hormone eyingxenye ye-gel esetshenziselwa ukugqugquzela abasebenzi kwizikhungo zezokwelapha. I-sperm izokwenzela umlomo wesibeletho womsebenzi, ngokuhlakanipha uyayinciphisa. Imibala izothuthukisa ukukhiqizwa kwe-oxytocin, okubangela ukuchithwa kwe-uterine. Le hormone, futhi, i-antidepressant enhle kakhulu. Ukuxhumana ngokocansi kugcizelela ukugeleza kwegazi esifundeni sezintambo futhi kuholele isibelethwane ngethoni. Mhlawumbe, lokhu kuyisisusa esimnandi kakhulu sokuzalwa komntwana ekhaya.
Zama ukwenza umzimba wokuvuselela ekhaya. Ukuzivocavoca okuvamile okusemthethweni kuzokwenza. Ungakwazi ukuhlanganisa ngempumelelo umthwalo wenyama futhi ulethe indlu ngokuhlelekile. Umphumela omkhulu ukugeza phansi. Futhi hhayi ngempela ngezandla zakho, ungasebenzisa i-mop. Hamba kaningi. Futhi ukhohlwe ukuthi kuneziphakamisi. Ukunyuka izitebhisi kuyindlela enhle kakhulu yokugqugquzela ukubeletha.
Ungazama ukwandisa ukujikeleza kwegazi ngosizo lwe-pepper plaster noma igridi ye-iodini esikhwameni, ishaxa ehlukile noma uvakashele ibhuku lokugeza.
Enye indlela ethandwayo yokuvuselela abasebenzi ukuphuza amafutha omncane (isipuni esanele). Amafutha e-Castor anezindawo ezinhle zokuphumula futhi angavusa ukuvulwa kwesibeletho. Ngaphezu kwalokho, i-castor oyela njalo isetshenziswe njenge-laxative. Ngakho-ke, uma ufaka umnyango womndeni, akudingeki ukuba uhambisane nenqubo yokugeza amathumbu.
Kodwa nokho, amafutha omculo kufanele ashiwo ngamasu okuphuthumayo. Okokuqala, zama ukuqhuba izindlela zemvelo zokuvuselela abasebenzi, ngokuzilungisa ngokudla kwakho kwansuku zonke. Ukufakwa kwimenyu yemikhiqizo enezinto eziphakeme ze-fiber, njengezinyosi, iklabishi, isaladi yemifino, kuboniswa lapho uhlanza amathumbu. Kodwa-ke, izihlungulu ezibhekene ne-peristalsis yamathumbu zibangela ukwehlukana kwesibeletho.
Kusukela evikini lama-34, thatha i-capsule eyodwa yamafutha e-primrose nsuku zonke. Ukwandisa ukukhiqizwa kwe-prostaglandin.
Phuza nsuku zonke 2 - 3 indebe decoction of amaqabunga okusajingijolo. I-agent iyanciphisa ubungozi bokuphuka futhi ithambekele emigqeni endaweni yomsakazo wokuzalwa.
I-anesthesia ene-caesarean section - jikelele, umgogodla, i-epidural
Ukwelapha Ukucindezeleka Kwangemva Kwesonto
Indlela yokunciphisa ama-bouts
Ukuzivocavoca ngemuva kwesigaba se-caesarean
Ngiyakwazi nini ukupompa umshini emva kwe-cearean?
Ukuzalwa emasontweni angama-28 ukubeletha
I-plasticity yesisu ngemuva kokubeletha
Isigaba saseKesariya njengoba sifisa
Indlela yokuhlanza isisu emva kwalearean?
Ukubeletha emva kwesigaba se-caesarean
Ungayitholi isisu ngemuva kokubeletha
Kungenzeka yini ukubeletha emva kwe-cearean?
Ukuzalwa kwesibili - ukuphindaphinda kwemizwelo edlule noma entsha?
Ingabe kukhona umphefumulo?
U-Euphemism inkulumo yanamuhla yaseRashiya
UJamie Dornan waba nguyise okwesibili
Izandla ezibandayo zengane
Usuku Lomhlaba Wamanzi
35 izinqumo ezimbi kakhulu zokuklama
I-serous meningitis - izimpawu
Iqoqo lomshado lamakhamera
I-Red Soup Soup
Izimpawu zothando lomuntu oshadile
Itiyi le-puer lihle futhi libi
Isethulo sangaphakathi sesigubhu - amasonto angu-12
I-White elula ilanga
Amasonto angama-36 okukhulelwa - zingaki izinyanga?
Matrona Moscow - umthandazo wokukhulelwa
Ukugqoka amakoton for ehlobo
Jeans enemfashini - entwasahlobo-ehlobo 2015
Zingaki ama-carbohydrate ase-apula?
Izinhlobo ezinhle kakhulu ze-pepper elimnandi